Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo Shaaciyey Xilliga la bilaabayo Bixinta Kaadhadhka Codbixinta | Somaliland Post
Home News Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo Shaaciyey Xilliga la bilaabayo Bixinta Kaadhadhka Codbixinta
Hargeysa (SLpost)- Guddiga Doorashooyinka Somaliland, ayaa maanta shaaciyey wakhtiga la bilaabayo qaybinta Kaadhka codbixinta Doorashada Goleyaasha Deegaanka iyo Wakiillada oo loo muddeeyey inay dalka ka qabsoonto 31-ka May 2021-ka.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Cabdirashiid Riyo-raac Oo shir-jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa maanta, ayaa Sheegay in qaybin Kaadhadhka Codibixintu 11-ka Bishan March ka bilaabmi doonto gobollada Saaxil, Sool iyo Sanaag.
Guddoomiye Riyo-raac waxa uu sheegay inay ku xigi doonaan gobollada Togdheer, Maroodijeex iyo Awdal oo wakhtiga la bilaabayo aan la muddeynin, balse la bilaabi doono marka la soo gebo-gabeeyo saddexda gobol ee Bariga dalka.
Md Cabdirashiid Riyo-raac waxa uu dar-daaran u jeediyey Hawl-wadeennada Guddiga Doorashooyinku u xil-saareen Qaybinta Kaadhadhka Codbixinta, kuwaas oo uu u soo jeediyey inay xil-kasnimo iyo daacad u gutaan masuuliyadda loo xil-saaray.
Haddaba, waxa aanu muuqaalka Hoose idinku soo gudbinaynaa Hadalka Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka